Izinto eziyi-10 Amahora ama-8 e-CES 2017 Ungifundise NgeThobhoni Yakusasa | Martech Zone
Njengesilima, ngijoyine abanye abachwepheshe bezobuchwepheshe abakhathalela igajethi abangu-165,000, abathengisi, abagqugquzeli, ama-hucksters, nabasizi be-CES 2017 ngesonto eledlule.
Le moto inengadi kudeshi
Isikhathi sami esiningi bengisichitha ngihlangana nabantu. Noma, ngokunembe kakhudlwana, eLyfts, e-Ubers, nakuma-cabs alwa i-Vegas traffic kusuka esihogweni ngisendleleni ngiyohlangana nabantu. Kepha ngigodle amahora ayisishiyagalombili wento wonke umuntu othanda ubuchwepheshe okufanele ayenze okungenani kanye: ukuzulazula phansi kwamahholo amakhulu omhlangano eCES, i-Consumer Electronics Show.
Ubonani? Uyabona kusasa.
Noma, kunalokho, imibono yangakusasa engahle igcwaliseke noma ingafezeki.
Ngethemba ukuthi abaningi ngeke, njengabashayi besibhakela abanemisebe yamadoda, ama-jeanshorts amancane abesifazane abasha abashisayo adlidliza ukubatshela ukuthi iyiphi indlela iGoogle Maps efuna ukuthi bahambe ngayo, noma yimaphi amarobhothi "ahlakaniphile" ahlukene amahlanu afuna ukuba yi-virtual yakho umngane, ukuchoboza, noma ukufaka okunye okubalulekile, ikakhulukazi uma ungumJapane, umncane futhi ungowesilisa.
Kepha ukuhamba phansi kwenze kwangicacela bha ukuthi kukhona okungenani ama-mega-theme ayi-10 acwilisa izinkampani zobuchwepheshe zabathengi.
Lapha kukhona, ngokuhleleka okuthile.
1: Izinto zezilwane
Angikwazi lokhu ngokuhlangenwe nakho kwami, kepha ngokusobala ukuthi sizithanda ngempela izilwane zethu. Futhi, sifuna ngempela ukungabi seduze kwabo.
Ngakho-ke sidinga ubuchwepheshe obubizayo besilwane esivumela ukuthi sondle izilwane ezifuywayo ukude ngezinhlelo zokusebenza kuma-smartphones ethu. Futhi sidinga ukukwazi ukuxoxa nabo ngevidiyo ukuze bazi ukuthi siyabathanda, futhi sizobuyela ekhaya kungekudala.
Noma okungenani lapho okuphakelayo okuzenzakalelayo kwesilwane kuphelelwa ama-Kibbles & Bits.
2: Izikhiye zendlu ehlakaniphile
Emcimbini wangaphambi kwe-CES "Pepcom" lapho ababonisi abakhokha imali ethe xaxa bengakhipha izimpahla zabo ukucindezela ama-flunkies akhangwa ukudla kwamahhala nabesifazane abancane, abakhangayo ezingutsheni zekolishi ze-cheerleader (angikuboni), angibonanga abangaphansi kwabahlanu, kodwa mhlawumbe izinkampani eziyisithupha, noma mhlawumbe eziyisishiyagalombili ezinokukhiya okuhlakaniphile.
Le yiwatchwatch engabukeki njengewatchwatch…
Angikwazi ukuqiniseka ngenombolo yangempela ngenxa yenani lamahhala leCorona abahleli abathulule ngenkani umphimbo wami.
Kunoma ikuphi, okhiye basemaphethelweni okuqothulwa, mhlawumbe, okuhle ngoba amandla awapheli emphakathini wami. Kepha sizokwazi ukunikeza okhiye abangaqondakali abalawulwa uhlelo lokusebenza ngesilawuli sokufinyelela esinqunyelwe isikhathi ukuhlanza amakhaya ethu, ukushiya izimpahla kanye nezinsizakalo, nokudubula ngezinto zethu.
3: Izihlalo zokubhucunga umzimba
Izintatheli zazi konke ngezihlalo zokubhucunga umzimba eCES. Ngalesi sikhathi, ngihambe okokuqala ekuseni, ngaphambi kokuba izixuku ezihlanyayo zingangeniswa esangweni lenqaba.
Izinto ezimbili ezinhle ngezihlalo zokubhucungwa: ziyabiza (cabanga ngama- $ 3,500, hhayi ama- $ 7,000), ziya ngokuba ngcono, futhi seziqala ukuthola isitayela esibukeka sengathi singafanelana nokuhlobisa kwakho kwasekhaya ngaphandle kokwenza ubukeke i-jerkoff ephelele.
(Yebo, ngiyazi ukuthi lokho kuthathu, kepha iCorona ibe nomthelela waphakade. Ngimangalele.)
Funda leyo ngxenye yokugcina ngokucophelela. "Ukuqala" ukuthola isitayela "okubukeka ngathi" "kungenzeka" empeleni kungakwenzi ubukeke njenge-jerkoff. Ngamanye amagama: hhayi lapho okwamanje. Into enhle ngalesi sitayela yehluleka: izokusindisa izinkulungwane.
4: 4K no-8K TV
I-4K ngokusobala ubuchwepheshe obuhle kakhulu, futhi ngilangazelela ukuyithenga lapho okuqukethwe engikuthola kumhlinzeki wami wesathelayithi, iNetflix, i-Youtube, i-iTunes, neminye imithombo empeleni kuyisekela njalo.
(Futhi lapho ngikwazi ukuyisakaza ngiye ekhaya lami ngaphandle kokuyilanda izolo ebusuku.)
Kepha i-8K ingcono kakhulu kune-4K. Kuphindwe kabili, njengoba wazi ukuthi unekhono elithile ezibalweni. (Empeleni i-4X ingcono, uma ubabazeka ezibalweni.)
Futhi ngithathe isinqumo sokuthi ngibambelele kwi-TV engu-98 ″ 8K engiyibone etendeni le-CES le-Samsung. Intengo ingama- $ 400,000, kepha angikhathazeki ngalokho, ngoba ama-oligarchs aseRussia kanye ne-VC esekelwa yi-VC Silicon Valley Series B startups bazothenga ngokwanele ukukhokhela ukuthuthukiswa komkhiqizo okuzokwehlisa intengo ngama-oda amaningi wobukhulu eminyakeni emihlanu ezayo.
Ngaleso sikhathi, okuqukethwe okungu-4K cishe kuzobe kuvamile ngandlela thile, futhi ngingathenga enye i-doodad yokulengisa i-TV ukuyikhuphula iye ku-8K “ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi okubonakalayo.”
5: Ama-Drones enza izinto empeleni
Ngonyaka odlule i-CES yafaka ama-drones. Futhi ama-drones. Futhi ama-drones amaningi. Kulo nyaka, bekuhluke kakhulu.
I-drone enemibala e-CES. Le ayenzi lutho (ngaphandle kwempukane)
Kwakusekhona ama-drones, nama-drones, nama-drones amaningi. Kepha lawa ma-drones empeleni enza izinto. Okungenani kumavidiyo abhalwe ngokucophelela futhi atholakala kancane kuphela avela kubakhiqizi abangachemile.
Ngabona ama-drones enza i-pro-level videography. Drones lowo mjaho. Ama-Drones ongawadubula. Ama-drones ezempi. Ama-drones emingcele. Ama-drones okulima afafaza ama-pesticides kepha ngezindlela ezivunyelwe kuphela zemvelo. Ama-Drones athatha izitho ezisanda kuvunwa kusuka kuma-cadavers ukuya ezibhedlela lapho zidingeka khona. Futhi ama-drones aletha ama-pizza uma ulambile, uvila, futhi ungathandi ukudla okunempilo.
Futhi-ke, isibhamu sokubulala i-drone.
Iqiniso liyabukeka futhi alijwayelekile - ngokwesibonelo: iningi lomsebenzi wakho. Iqiniso elingathandwa ngumuntu lizwakala kakhulu… kuthuthukisiwe, iqiniso langempela lingcono kakhulu, futhi uhlobo lweqiniso oluhlanganisiwe luhlanganisa okuhle kakhulu kwemihlaba yomibili.
Bheka, Ma, ngiyandiza…
Bobathathu babenobufakazi obukhulu ku-CES 2017, enamahedisethi ashibhile e-VR akuvumela ukuthi ubambe ifoni yakho amasentimitha ambalwa ukusuka ebusweni bakho futhi uqaphele ukuthi iphikseli ukuthi leso sikrini okuthiwa siphezulu-kunencazelo empeleni sinjani kunezinkampani zeVR ezizo empeleni usinde kuze kube umbukiso wangonyaka ozayo.
Kepha abasebenzi beZeiss bacishe bakuqinisekisa ukuthi i-Apple 8 ye-Apple izokwenza ukungathandwa kwabathelisi esikubona ngokoqobo.
7: Konke okungenantambo
Zonke izintambo, ochwepheshe bezobuchwepheshe kubonakala sengathi ziye zanquma, kufanele zife. Lezi yizindaba ezamukelekile kimi, njengomnikazi oziqhenyayo wesethi ye-PlayStation VR enezintambo eziningi kune-Apollo 13.
Indawo yonke iyanikeza futhi indawo yonke iyathatha, noma kunjalo, futhi manje amabhethri abaluleke kakhulu, abaluleke kakhulu.
8: Yonke into ehlakaniphile
Ubuhlakani bokufakelwa buyinto entsha "konke okwemvelo," kusho othile muva nje, futhi ngokusobala bonke abathengisi begajethi bathole umyalezo ngasikhathi sinye, i-pre-CES.
Yonke into ihlakaniphile, yonke into ithuthukiswe nge-AI, futhi yonke into ifunda ngaso sonke isikhathi ukuthi ingakusiza kanjani kangcono ngokuthuthuka okuncane okususelwa ekusetshenzisweni. Kwashaywa umthetho omusha yiCongress, futhi akukho mikhiqizo emisha - amabhulashi ezinwele, izindlu zangasese, nezinkomishi ezifakiwe - ezingaqaliswa ngaphandle kohlu oluphelele lwenzwa, imisakazo, amakhamera, amashipsi, kanye nohlelo oluxhunyiwe olulawula konke.
9: Izingxoxo zomsebenzisi ezixoxayo
Njengoba sonke sazi, ukukhipha ifoni, ukuziqinisekisa, ukuthola nokuvula uhlelo lokusebenza, futhi ukubheka isikrini sakho ngu-2016 impela.
Imoto yami neGoogle, kufana, namahlumela amahle kakhulu
Ku-2017, sikhuluma nje nobuchwepheshe bethu.
Futhi-ke, kukhuluma nathi.
I-Amazon Echo ingaphezu konyaka ubudala, kunjalo, kepha u-2017 unyaka ozoqhuma ngawo, ngenani lamakhono, noma ama-mini-apps asebenzayo, ephindwe kabili esontweni elilodwa le-CES. NgeCortana, Viv, Umsizi weGoogle, futhi yebo, ugogo uSiri, sinekusasa elibalulekile lobuchwepheshe bokuxoxa obusendleleni yethu.
10: Okungokoqobo okungathandwa kwabathelisi esikubona endlebeni
Ukukhombisa iso izinto ezingezona into eyodwa. Kepha akukuhle ukushiywa ngaphandle, futhi izindlebe sezisungule ikomidi lezombusazwe ukuqinisekisa ukuthi amalungelo abo ayahlonishwa.
Ngakho-ke ukungathandwa kwabathelisi esikubona ngendlebe kwakuyinto e-CES, futhi ngokungagwegwesi, kuyinto enhle.
Abakhiqizi bakhipha amadivayisi wesitayela se-AirPod asezindlebeni apholile kakhulu kunezinsiza zikababa wakho zokuzwa, futhi bakuvumele ukhethe imisindo ecasulayo - njengezwi lomlingani wakho. Hlanganisa lokhu namahedisethi wangempela we-virtual and augmented, futhi kungekudala uzokwazi ukulawula izihlungi zemizwa ezikuvumela ukuthi ulolonge iqiniso libe yilokho ofuna kube yikho.
Ngamanye amagama, njengebhola lakho leqiniso le-Facebook, kepha okungcono kakhulu.
Kepha… Ngisayithanda i-tech
Kuyajabulisa ukuhlekisa ngamagajethi amasha e-CES. Kepha ukungathí sina umzuzwana owodwa, kujabulisa kakhulu ukuhambahamba phansi futhi umangale ngokuhlukahluka kwamagajethi abantu abaphupha ngawo.
Futhi ukwazi ukuthi ngandlela thile, ngandlela thile, okunye kwalokhu kuzoba okujwayelekile esikhathini esizayo esingekude kakhulu.
Tags: 20174k amathelevishiniAma-4k tvs8k amathelevishiniAma-8k tvsaiarlezilezi 2017umthengidronesamagajethilas vegasizihlalo zemasaimrubuchwepheshe bezilwane ezifuywayoezifuywayoamakhaya ahlakaniphileizindlu ezihlakaniphileUbuchwephesheizwivrwireless
Jan 14, 2017 ngo-12: 46 PM
Sawubona john bekuyindatshana efundisayo.
Jan 14, 2017 ngo-5: 10 PM
Ngiyabonga! Ngiyethemba bekumnandi futhi 🙂
Jan 15, 2017 ngo-10: 51 PM
Ezobuchwepheshe ziguqula umhlaba. Kholwa ukuthi silangazelele ukuhlangana nabaqedisi bangempela. Isibonelo esisodwa esihle yi-Google, ukuthi i-algorithm yabo yokusesha ye-semantic yenza kanjani umbuzo wosesho uhambisane kakhulu. Ukufunda komshini kudlala kanjani indima ebalulekile ekuqondeni ukuthi ungaxhumana kanjani nabantu futhi uthathe izinqumo ngokususelwa kukho. Ngenze ingxoxo nochwepheshe wokusesha we-Semantic uDavid Amerland, Uma seyishicilelwe ngizokwazisa. Engxoxweni uDavid uchaza ngokusobala ukuthi ukusesha kuguquka kanjani.
Jan 16, 2017 ku-11: 34 AM
Ngibheke phambili ukuzwa ukuqonda kwakho!